राष्ट्रपतिकालागि गाडी किन्न भीख माग्दा कति उठ्यो ? « Postpati – News For All
राष्ट्रपतिकालागि गाडी किन्न भीख माग्दा कति उठ्यो ?
मंसिर १६ , काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी खरिद गर्न लागिएको विरोधमा केही दिन अगाडि एक हुल युवाहरु पशुपतिमा एक रुपैयाँ भिख माग्दै हिँडेका थिए । उनीहरुले अहिलेसम्म कति पैसा उठाए र त्यो पैसा के भयो होला भनि सोधखोज गर्दा पत्ता लाग्यो, राष्ट्रपतिका लागि नमूना गाडी तयार भइसकेको रहेछ ।
भिख माग्ने समूहका एक सदस्यका अनुसार उनीहरुले एक-एक रुपैयाँ मागेर २३ सय रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । त्यही रकमबाट नमूना गाडी बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई पठाउन लागिएको उनले बताए ।
‘राष्ट्रपतिलाई दिनका लागि हामीले स्वदेशी डमी गाडी बनाइसकेका छौं । त्यो छिट्टै सार्वजनिक पनि गर्छौं,’ उनले भने ।